War Saxaafadeed: Madaxweynaha Soomaaliya Ayaa Dalbaday Taageero Caalami Ah Oo Deg-deg ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / War Saxaafadeed: Madaxweynaha Soomaaliya Ayaa Dalbaday Taageero Caalami Ah Oo Deg-deg ah
War Saxaafadeed: Madaxweynaha Soomaaliya Ayaa Dalbaday Taageero Caalami Ah Oo Deg-deg ah
August 30, 2010 - By: Hanad Askar
Iyada oo maanka lagu hayo weerarkii isqarxinta ee lala eegtay Hotel Muna 24-kii August 2010, oo galaafatay nolosha dad Soomaaliyeed oo rayid ah oo gaaraya 30 qof, oo ay ku jiraan afar xildhibaan. Madaxweynaha Dowladda Federaalka Ku-Meel-Gaarka ah, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa cusbooneysiiyay dalabkiisa ku aaddanaa in indhaha Beesha Caalamka lagu soo jeediyo arrimaha Soomaaliya, maadaama xagjirka Alshabaab Â ay u dhar-dhigteen ololahooda argagaxisonimo. â€œSax ma aha in Soomaaliya kaligeed lagu daayo ka hortagga Alshabaab iyo Alqaacida oo jaalkood ah, maadaamaÂ Soomaaliya ay imanka uun kasoo baxayso 20 sano oo burbur, qas iyo jahawareer siyaasadeed ah.â€ Ayuu ku yiri Madaxweyne Sheekh Shariif war murtiyeedkiisa.
Marka la eego weerarkii is-qarxinta ee July 11-keedii lala eegtay Kampala, iyoÂ weerarkii Mogadishu ee Alshabaab iyo saaxiibadood ay abaabuleen, waxaa muuqata in argagaxisadu ay qorshaysteen in ay carqalad iyo xasilooni laâ€™aan ku camimaan gobolka Geeska Afrika oo dhan iyo ka fogba. â€œDowladda Soomaaliya, waxa ka goâ€™an, dib-u-yag-leelka sharciga iyo kala-dambeynta Muqdisho, iyo in ay gaashaanka u daruurto Alshabaab iyo kuwa taageera ee wata afkaaraha nidaam-diidka ee ku xiran xagjirnimada oo ay fidiniyaan, ayuu yiri Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. â€œInkastoo ay jiraan culeysyadaas, waa inaynaan waligeen illoobin in guushu ay u baahan tahay istaraatijiyad iyo u dhabar-adayga hawsha.â€ ayuu yiri Madaxweynuhu.
Hase yeeshee, in si dhaba looga hortago argagaxisda, dowladda waxa ay u baahan tahay kaalmada bulshada caalamka.
Sida ayba qirtay dowladda Mareykan dhawaan, Alqaacidada ku sugan carriga Carabta ee ay xuddun tahay waddanka jaarka inala ah ee Yaman Â ayaa ka khatar badan ta ku sugan Bartamaha Pakistaan. Iyada oo ay jirto xaqiiqda ah in Pakistan — sida Afghanistan iyo Ciraaq oo la ildaran tumaatida argagaxisada — ayaa waxay helaan taageero wax ku ool ah marka laga hadlaayo dhinaca dhaqaalaha, lojistikada iyo qalabka militariba. Dowladda Soomaaliyeed ma haysato taageero la mid ah ama u dhaw taa, mana laha ilaha dhaqaalaha dowladahaas leeyihiin oo kale. Isla markaasna, â€œdowladda Soomaaliyeed ayaa waxay wajahaysaa cadow la mid ah, waaba haddii uusan ka khatar badnayn.â€ Ayuu Madaxweynuhu xusay.
Iyada oo ay jirto xaqiiqda ah in ilaha dhaqaale yaryihiin ayay ciidamada dowladda FKM ahi ku mintideen difaacidda meelaha halbawlaha u ah dowladda, kana goâ€™antahay inay jabiyaan Alshabaab. Â â€œMaadaama kooxa nabad-diidka ahi ay wadaan khatar isaga gudbaysa xuduudaha ayay dowladda Soomaaliya mar kale ku celinaysaa dalabka ah in lala soo gaaro taageero caalami ahâ€ ayuu yiri Madaxweynaha.
Â Warfaafinta Madaxtooyada